Olee otu-Iji • Simplr
Home / nkwado / Olee otú
Ọ bụrụ na ị na-agụ nke a, enwere ezigbo ohere ị zụtala nke eriri igwefoto anyị… yabụ anyị kwuru Daalụ.
Lee ụfọdụ isiokwu na-enye aka ịgụ tupu ị wụnye eriri igwefoto ọhụrụ gị.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, kpọtụrụ anyị. Anyị hụrụ n'anya ịnụ site na ndị ahịa anyị ma anyị na-enwe ọ happyụ mgbe niile iji nyere aka.
M1 usoro etu esi-aga
Obere QD Loops How-To
Gbasaa Mpempe Olee-aga-aga
All F1 How-aga F1ultralight Olee-Iji M1 usoro etu esi-aga Obere QD Loops How-To Gbasaa Mpempe Olee-aga-aga
Tugharia F1 gi na nkwojiaka
Na-agbanwe ngwa ngwa igwefoto F1 gị site na eriri dị ogologo ogologo, ruo ogologo olu ọdịnala achọghị nkọwa. Tụgharị ya na eriri aka abụghị obere ihe - rue mgbe ị hụrụ ka ọ dị mfe! Enyela nsogbu ịnara popcorn, n'ihi na nke a bụ vidiyo kacha nso na akụkọ ntolite mmadụ. * Ọ metụtaghị F1ultralight.
Wụnye Simplr Split Rings, ma ọ bụ Lug Mount F1
* Ọ bụrụ na ị na-etinye Simplr Split Rings, ọ bụghị eriri igwefoto F1, ị nwere ike ịgba ọsọ ozugbo na 1: 07 na vidiyo a. F1 ọhụrụ gị ga-enwe obi ụtọ karịa iji ya ma ọ bụrụ na ịmee "nkwụsị" ọsọ ọsọ tupu ịwụnye ya na igwefoto gị. Gbanwee eriri ahụ site na opekempe ruo ogologo ogologo ihe dị ka ugboro iri abụọ, site na ijide […]
Wụnye Flat Mount F1
F1 ọhụrụ gị ga-enwe obi ụtọ karịa iji ya ma ọ bụrụ na ịmee "nkwụsị" ọsọ ọsọ tupu ịwụnye ya na igwefoto gị. Gbanwee eriri ahụ site na nke kacha nta ruo n'ogologo ihe dị ka ugboro iri abụọ, site na ijide njedebe na ịdọrọ taabụ. The larịị ugwu mbipute nke anyị F1 igwefoto eriri installs N'otu aka ahụ a […]
Etu esi etinye obere QD Loops ™ ka ese foto nwere mgbaaka mgbaaka
Ọ gwụla ma ị 100% doro anya na igwefoto gị nwere lugs dị mma, ọ kachasị mma ka ị gbakwunye Obere QD Loops site na mgbaaka mgbawa. Ọzọkwa, anyị na-atụ aro ka ị jiri nke anyị, ebe ọ bụ na a na-ahapụrụ ha iche iji rụọ ọrụ mara mma na eriri loops (nke ka mma karịa nke triangular). 1. Tinye eriri eriri site na mgbanaka nkewa. 2. […]
Etu esi etinye obere QD Loops ™ ka kamera na-enweghị mgbaaka mgbaaka
Tupu ịtinye obere QD Loops ozugbo na eriri eriri, gụọ ọkwa a dị mkpa: Mkpịsị Lug Ntinye: Gini bụ ha na gịnị kpatara m ji elekọta? Ọ gwụla ma ị bụ 100% ụfọdụ na igwefoto gị nwere lugs dị mma, ọ kachasị mma ka ị gbakwunye Obere QD Loops site na mgbaaka mgbawa, dị ka edepụtara ebe a. 1.Jide eriri eriri eriri site na eriri […]
Lug Insert: Ihe ha bụ na gịnị mere m ji elekọta?
Ihe ha bụ ihe ntinye akwa bụ akwa “aka uwe” siri ike nke dị n'ime eriri eriri. A na-eche ha iji belata ihe eji eme ka ígwè na-akpata mgbe nchara siri ike gbawara mgbaaka na-ete aka na ngwongwo ndị dị nro. Igwefoto ụfọdụ nwere ihe ntinye aka na ụfọdụ enweghị. Fujifilm ese foto bụ ndị a ma ama maka inwe ihe nwere ike ịdọpụ eriri eriri, tinye na kamera Fuji ọgbara ọhụrụ gụnyere […]
Iwepụ mkpịsị uhie Lug si na Fujifilm ese foto (Nhọrọ)
Ọ bụrụ n'inwee igwefoto Fujifilm, ịchọrọ ịtinye obere QD Loops ™ ozugbo na igwefoto gị, ịnwere ike iwepu ihe ntinye eriri gị iji kpughee ebe mgbakwunye dị nro. Biko rịba ama na ọ bụrụ na ị mee ọkọ ụdọ n'oge usoro a, ị ga - eme ka ha dị nkọ karịa […]